Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || उद्यमः उत्तम जीवन (गन्थन) – kayakairan.com
उद्यमः उत्तम जीवन (गन्थन)
‘म समाजमा व्याप्त समस्या समाधान गर्नका निमित्त उद्यमी बनेको होइन । उद्यममार्फत आफूलाई व्यक्त गर्नका लागि म उद्यमी बनेको हुँ । संगीत, चित्रकारिता, रंगमञ्च, कविताजस्तै उद्यम पनि आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो ।’ कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘युथ फर नेपाल’ नामक सत्रमा युवा उद्यमी शिक्षित भट्टले दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।
‘टूटल’ नामक ‘स्टार्ट अप’ का सञ्चालक हुन् शिक्षित भट्ट । केही कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा नै उनको ‘स्टार्ट अप’ निकै लोकप्रिय बनेको छ । बृहतररुपमा सूचना र प्रविधिमा आधारित छ ‘टूटल’ । काठमाडौंमा विद्यमान यातायातको चरम सकसलाई सरल बनाउनमा यसले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
भट्टले आफ्नो उद्यमशीलतालाई ‘टूटल’ मार्फत व्यक्त गरे । उनको अभिव्यक्तिले धेरैभन्दा धेरैको जीवनशैलीलाई सरल बनाइदियो । र, यही उनको सफलताको कारण बन्यो । ‘टूटल’ मार्फत दशौं हजारले रोजगारी पाएका छन् भने लाखौंले यातायातको सुविधा पाएका छन् ।
उनले उद्यमलाई एउटा कलाको संज्ञा दिएका छन् ।
भट्टको भनाइसँग मेरो अनुभवले पनि आंशिक मेल खान्छ । मैले पनि समाज र राष्ट्रका लागि केही गर्छु भनेर उद्यमको थालनी गरेको होइन । जागिर माग्ने होइन, जागिर दिने मान्छे बन्छुजस्ता ठुल्ठूला महत्वाकांक्षा ममा थिएनन् । म उद्यमी बन्नुको पछाडिका कारण मेरा आधारभूत आवश्यकताहरुको पूर्ति थियो । र, अरु केही थियो भने कर्पोरेट वल्र्डको ग्ल्यामर !
अहिले भने म मेरो उद्यमको उद्देश्यसँग स्पष्ट छु । उद्यमको उद्देश्य उपभोक्ताको जीवनशैलीलाई सरल र गुणस्तरीय बनाउनु हो । ग्ल्यामरको संसारमा नै मैले ज्ञानको आलोक पाएँ । र, बुझेँ कि उद्यमको परिधि र शक्ति उद्यमीको खुबी र ‘क्वालिटी’मा निर्भर रहन्छ ।
समयको माग हो–सरलतामा नविनता । तपाईंले कति पृथक अर्थात नयाँ र सरल तरिकाले सेवा प्रवाह गरिरहनुभएको छ त ? तपाईंको उद्यमको भविष्य यही प्रश्नको जवाफले निर्धारित गर्छ ।
प्रिय पाठक, आउनुहोस् अब एकै छिन सरकारका कुरा काटौं । गत साता मात्रै ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०१९’ सम्पन्न भएको छ । विश्वका ४० भन्दा बढी देशबाट आएका ६०० भन्दा बढी लगानीकर्तालाई नेपाल लगानी गर्न अनुकूल मुलुक हो भनी नेपाल सरकारले आश्वस्त पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रि«य लगानी भित्रिनु निसन्देह सह्रानीय छ । यसले देशमा व्याप्त चरम बेरोजगारीलाई घटाउनेछ भने अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेछ ।
तर, प्रश्न यो हो कि मुलुकभित्रको लगानीबारेमा सरकार कत्तिको गम्भीर र लचिलो छ ? देशभित्रका युवा उद्यमीको उत्प्रेरणाका लागि सरकारले के–कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ? सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य यही हो कि युवा उद्यमी र नव उद्यमशीलता सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेनन् ।
वैदेशिक पलायन किन युवाहरूको रोजाइँमा पर्छ ? किनभने ‘देशमा गरी खाने बाटो’ छैन । झन्झटिलो व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया नै उद्यमको सुरुआत गर्न खोज्ने युवाको जोश र जाँगरलाई सिथिल बनाइदिन काफी छ । विदेश जाँदा भने लगानीकर्ता पनि सजिलै पाइन्छन् । लगानीकर्तालाई राम्रोसँग थाहा छ स्वदेशमा लगानी गर्नु बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो भनेर । किनभने स्वदेशमा त्यो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै छैन ।
व्यवसाय सुरु गर्दा र गरेपछि आइलाग्ने प्रशासनिक वाधा व्यवधान र ठाउँ कूठाउँमा ख्वाउनुपर्ने घूस देखेर युवा आजित हुन्छ र अन्ततः विदेशिन बाध्य हुन्छ । व्यवसाय दर्ता गर्दाको झन्झट र त्यसले पार्ने प्रभावलाई राम्रोसँग बुझेर होला अप्रिल ११ बाट सुरु हुने भारतको लोकसभा चुनावलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको आफ्नो घोषणापत्रमा कांग्रेस–आईले ‘यदि युवाले उद्यम गर्न खोजे तत्काल दर्ता गर्नु नपर्ने नीति बनाउने’ बताएको छ ।
२५ वर्षभित्र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको यो आँकडा हासिल गर्न तबसम्म सम्भव छैन जबसम्म सरकारले देशभित्रको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दैन । सधैँभरि बाहिरिया लगानीको मात्रै भर परेर राष्ट्रलाई परनिर्भर बनाउने कि नागरिकलाई उद्यमशील बनाएर आत्मनिर्भर बनाउने ? निर्णय सरकारको हातमा छ । देश रेमिटेन्सले धान्ने कि जनताको करले ? यो निर्णय पनि सरकारकै हातमा छ ।
उद्यमशीलता अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसर्थ उद्यमीहरु राष्ट्रका खम्बा हुन् । यो रहस्यसँग साक्षात्कार नहुँदै केही भय र उत्साह बोकेर म उद्यमशीलताको यात्रामा निस्केको थिएँ । हाल म तीनवटा ‘स्टार्ट अप’ मा प्रत्यक्ष संग्लग्न छु । तीन वटै ‘स्टार्ट अप’ लाई स्थापित गर्ने संघर्ष जारी छ । भन्छन्, समय सबैभन्दा ठूलो गुरु हो । यात्राका क्रममा कहिले उकालो त कहिले ओरालो आउनु स्वाभाविक हो । तर, संयमता अपनाइएन भने दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । यात्राका दौरान राज्यबाट पाउनुपर्ने उत्प्रेरणाको अभाव भने महसुस भइरहन्छ ।
प्रिय पाठक, गत गन्थनमा मैले मेरो गल्तीको समीकरण प्रस्तुत गरेको थिएँ । आजको गन्थनमा मैले ती गल्तीबाट सिकेको शिक्षा साझा गरेको छु । उद्यमको सुरुआतमा मैले गरेका गल्ती कुनैपनि नयाँ उद्यमीले नदोहो¥याइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो ।